Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: ONLF Kun Jeer Mahadsanidiin, By: Hadi Luqman
Maqaal: ONLF Kun Jeer Mahadsanidiin, By: Hadi Luqman
Posted by Dayr	/ December 31, 2018
Gudoomiyaha Jabhadda, ku-xigeenkiisa, xoghayaha guud, hogaamada kale iyo abaanduulayaasha ciidamada, naftood hurayaasha, hawl-wadeennada, weriyayaasha, abwaannada, hooyooyinka, dhalinyarada, xubnaha, taageerayaasha ururka iyo madaxda jaaliyadaha ee dal iyo dibedba jooga, kun iyo kow jeer mahadsanidiin.
Gudoomiya, adiga iyo ururkaaguba, halgankii naf-huridda ahaa ee aad la gasheen cadowga TPLF, iyo guushaad ka gaadheen, waad ku mahadsan tihiin. Waxaad abbuurteen dareen diidmo iyo waddaniyadeed. Waxad garab iyo gaashaan u noqoteen shacabka deegaanka soomaalida oo gumeystuhu aaminsanaa inuu ka xoog iyo ciidan badan yahay, islamarkaana inta uu xasuuqo, deedna dhulkooda iyo kheyraadkooda, si dhib yar u la wareegi doonaa.
Tan iyo maalinkii duullaanka gumeystuhu deegaanka soomaalida ku ekeeyay, waxa jirtay, iimaan-laawayaal gumeysiga danahiisa u adeegayay, shacabkana dulmi iyo dhibaato ku hayay, sidaas oo ay tahay, haddana waxa jirtay koox mar walba u taagnayd difaacista damiirka, sharafka iyo madax-banaanida ummadeenna,- Jabhadda ONLF, waxay taariikh DAHAB ah kaga suntan tahay hayaanka gobanimadoonka ee loogu jiray, gobeynta iyo xoreynta dadkeenna, waad ku mahadsan tihiin urur ahaan.
21 October, 2018- heshiiskii taariikhiga ahaa ee aad nabadda ku doorateen, inaad ku halgamaysaan, dabadeedna waxwalba oo keeni kara helitaanka xoriyadda iyo xuquuqda dadkeena aad ku raadinaysaan hab dimuqraadi ah oo dastuuri ah, heshiiskaas inaad qalinka ku duugteen, mar saddexaad iyo mar afraadba waad ku mahadsanaydeen.
Gudoomiye, nabadda shaqsi geesi ah, urur daacad ah iyo ummad sarreyn iyo gobannimo leh baa gasha, ee ma galo shaqsi fulay ah, koox aan rabitaan shacab ku socon oo maxaysato ah-, inaad halgankii qoriga ahaa qalin u badasheen, weerarkii aad ka dhigteen wacyi-gelin, abbaabulkii aad wax-qabad u rogteen iyo u kuur-gelid, kun jeer baad ku mahadsan tihiin.
Gudoomiye, hal shaqsi oo qadiyadda ummadeenna u shahiiday, ma goyn karo qiimo adduunyo, waxaase lagu illaabi karaa, inaan aragno maxkamadihii oo madax banaan, caddaalad, horumar iyo ummadeenna oo leh talada kala doorashada cidda matalaysa. Gudoomiye waad ku mahadsan tihiin adiga iyo ururkaaguba, taageeridda neecawda dawladeed ee deegaanka ka bilaabatay iyo sida bisaylka leh ee loo mideynayo wiilasheennii, walaalaha ahaa ee qoriga midkood sida khaldan gumeystuhu u adeegsanayay.
Gudoomiye, Jabhaddu dagaalka ay TPLF la gashay sax buu ahaa, waanad ku mahadsan tihiin, nabadda iyo heshiiska aad gasheen EEGGANA, waad ku mahadsan tihiin, taageeridda hagar la´ aanta ah ee aad u muujiseen xukuumadda deegaanka ee rajadii soo celisayna, mar kale waad ku mahadsan tihiin.
Gud. weli cadowgii TPLF oo nooc walba leh, ayaa waddanka gees ka gees daadsan, waxayna awood walba isugu geeynayaan fashilinta iyo abburista qulqulatooyin deegaanka iyo dalkaba ugu soo laabta, middaas oo dhabar-jab iyo saameyn xun ku yeelan doonta rajada shacabkeenna qabo iyo dawladnimada ay u ooman yihiin,, sida aad u ga feejigan tihiin shirqoolada ay maleegayaan, waad ku mahadsan tihiin.
Gud. dadkeenu wuxuu deggan yahay deegaanno, gobollo iyo degmooyin kala durugsan, wuxuu dhaqdaa duunyo kala duwan: waxay isugu jiraan xoolo-dhaqato iyo beeralay, intaas oo dhan waxa mideyn kara, isu-soo dhaweyn kara, ee kalsooni ku abuuri kara, waa helitaanka urur hufan oo mid ah, dawladnimo loo wada dhan yahay, isu-tanaasul, kala dambeyn iyo dhismaha hay¨ adaha dawliga ah,.. inaad taageertay oo aad tusaale cad u noqotay halganka cusub ee rajo-abuurista ah, waad ku mahadsan tahay.
Gudoomiye, geesinimada shacabka deegaanka, naf-huriddooda iyo siday u quus geliyeen cadowga, waxaa tusaale nool ah, -Guuleed oo ahaa darawakii ku bad-baadiyay, adigoo cir iyo dhulba la gaa raadinayo. Wuxuu ahaa danlay iyo aabbo u xammaasha caruurtiisa, la nool cadowga, ka warqaba wax-yeeladiisa, -intaas oo jirtay ayuu u badheedhay inuu halis geliyo naftiisa, islamarkaana badbaadiyo astaan kamid ah, astaamaha halganka ummadeenna, isagoo ku mutaystay xabsi dheer.
U gu dambeyn, gudoomiye waan kaaga mahadcelinayaa sidaad ururkaaga gudo iyo dibedba mid qudha u ga dhigtay, sidaad shacabkaaga u gu hiilisay, waad ku mahadsan tahay go´ aanka geesinimo ee aad heshiiska kula gasheen itoobiya, idinkoo geeska afrika ka dhigay goob nabdoon oo leh mustaqbal ifaya. Kun jeer mahadsanidiin
W/Q: Haadi Lugmaan